Kitra, Nofinofy Malagasy | rafozan-doza
Tsy vitsy, hoy aho, ny efa very fanatenana @ ity lalao baolina kitra an'ny Malagasy ity.
Siora aho fa raha anaovana sondage io tena poinsa 80% isan-jaton'ny
Malagasy no tsy manisy sirany izay vokatra mitranga @ lalao
hifanaovan-tsika any intsony fa samy miara mionona hoe tsy haka "lesona" indray ve e . Tato ho ato anefa toa otran'ny netinety hafahafa izany ny fandehan-javatra. Lasa tafiditra @ dingana manaraka @ fifanina @ fandraisana anjara @ "coupe du monde" ny Barea. Eny e, ny nosy lekoma moa no tena resin-tsika (mba hizestiavana kosa aloha iny e ) fa na izany aza otran'ny mba metimety ny tantana e. Indrisy
anefa fa raha notosaina t@ alahady teo moa ny atsapaka hizarazarana
ireo ekipa hifanandrina @ dingana manaraka @ "coupe du monde" dia
tafiaraka @ Botswana sy Mozambika ary i Cote d'ivoire ny
ekipam-pirenena Malagasy. Ry zareo elefanta Ivorianina moa no tena
mivoaka favy @ izao, ary mamela azy ho mpandresy malalaka @ ity vondrona faha-7 misy antsika ity. Isika moa, vao haingana
no nihaona t@-ndrizareo ary tena mapme mampalahelo fa toy ny
fihomezantsika an'ny lekoma no namotsanandrizareo antsika na taty amintsika na tany @ taniny. Izany rehetra izany no mahatonga antsika hilofika indray. Sarotra ny mandainga fa tsy mora ny handresy an'i Drogba . i DotMG moa nanokatra dinika,
adihevitra iray @ filaharan'ny mpilalao izay mety andresentsika ny
Ivorianina. Za aloha tsy dia mahalala loatra ny mpilalao Malagasy ka
izay no tena tsy nidirako betsaka t@ le resaka. Ny naika ho lazaiko
fotsiny dia hoe tsy i Drogba irery no tokony hatahorana fa ireo ekipa
rehetra ireo. Ny pozipoziny manko dia otran'ny tsika no gidany @ ireo
firenena ireo... A court terme izany dia tsy misy fika fa ny eo no
ampiadiana e, fa ny tiako mba resahina kely dia ny momba ny a
moyen/long terme. * Ny Mpilalao: Tao @ dinika ihany no nisy namana nilaza ny momba ny hoe ecole de foot, jereo eto. Mety hoe hevitr'akoho an, fa inona moa no tena olana tsy
hanganantsika centre d'excellence hanofanana mpilalao baolina kitra e.
Revin-gadra tsotsotra an:- bandy kely entre 16-18 ans, efa nahazo baka ihany no raisina.- voafetra ny toerana, kely ny budget no ratsy ny qualite ra be loatra, disons, 15 isan-taona. Tsy atao mibahana be le equilibre regional fa ze olona sady lava ranjanana no bokona, ka mba efa mahay milalao kely no raisina. Tokony asiana interviews, refa voafantina t@ CV. -
omena bourse toy ny mpianatra eny Ankatso ireo bandy ireo, na tsy manin
mintsy aza atao presalaire otran'ny an'ny Agro e, 15 ve moa handany
otrin eo.- 3 taona ny curcus